Dagaalka Ukraine: Maxaa kala qabsaday haweeney Carmal ah iyo askari Ruush ah oo ninkeeda ka dilay? | Onkod Radio
Muqdisho (Onkod Radio ) – Maalmihii ugu horreeyay ee uu billowday dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa nin 62 jir ah oo aan hubaysnayn lagu dilay waddo xaafad ku dhex taalla oo gurigiisa bannaankiisa ah. Magaciisu waxa uu ahaa Oleksandr Shelipov.
Saddex bilood kaddib, askari Ruushttps://twitter.com/MohamedJibrile?t=hNel14LD9aGOkXmfGc1DKg&s=09h ah oo lasoo qabtay, laguna eedeeyay inuu ninkaas dilay ayaa maxkamad lagu soo taagay magaalada Kyiv. Dacwadda lagu soo oogay nooceedu waa dambi dagaal.
Muxuu kaa galabsaday ninkeyga?’ ayay Kateryna Shelipova waydiisay askariga Ruushka ah ee qirtay dilka ninkeeda
Hase ahaatee, xukuumadda Moscow ayaa beenisay in ay dad rayid ah bartilmaameedsatay.